Tiradii ugu badnayd tahriibayaasha naftooda ku waayay Tegiska Yurub sanadka 2011, sanadka cusub ee 2012 oo la kowsaday Maydadka 55 Somali ah iyo wallaaca UNHCR | Berberanews.com
Home WARARKA Tiradii ugu badnayd tahriibayaasha naftooda ku waayay Tegiska Yurub sanadka 2011, sanadka...
Tiradii ugu badnayd tahriibayaasha naftooda ku waayay Tegiska Yurub sanadka 2011, sanadka cusub ee 2012 oo la kowsaday Maydadka 55 Somali ah iyo wallaaca UNHCR
Hargeysa-(Berberanews)-Warbixin ka soo baxday Hay’adda Qaxoontiga Adduunka ee UNHCR, ayaa daboolka ka qaaday in sanadka 2011 ay naftooda ku waayeen 1500 oo tahriinayaal u badan African iyo Carab doonayay inay ka gudbaan badda Mediterranean, si ay u gaadhaan dalalka Yurub.
Sida lagu shaaciyay warbixin UNHCR ka soo saartay magaalada Geneva, waxa lagu xusay in sanadka dhammaaday ee 2011 noqday sanadkii ugu badnaa tirada dhimashada tahriibayaasha doonyuhu la degeen amma la waayay oo gaadhay 1500, marka la barbardhigo sanadkii 2007 oo 630 qof ku le’deen.
Warbixintu waxay daaha ka rogtay sababaha korodhka tirada tahriibayaasha oo ka dhalatay dad ka yaacay qulqulatooyinka kacdoonnadii shacabka dalalka Libya iyo Tunisia xukunka kaga rideen hoggaamiyayaashoodii mudada dheer soo xukumayay iyo dad ka yimi dalal kale oo Afrika ku yaal, kuwaasoo ay ku jiraan Soomaali tiro badani.
UNHCR waxay sheegtay inay baadhitaanno ku hayso garaacis iyo jidhdil loo geystay qaar ka mid ah tahriibayaasha ka badbaaday dhimashada ee gaadhay dalalka Yurub oo qaarkood lagu khasbo inay masaafo ka fog berriga lagaga tuuro doomaha soo raaceen.
“Inta ugu badan tahriibayaasha sanadka 2011 u gudbay dhinaca Yurub waxay gaadheen Talyaaniga, oo dhan 56,000, kuwaasoo 28,000 oo ka mid ahi u dhasheen dalka Tunisia. Halka Malta iyo Giriigana ay gaadheen 1,574 iyo 1,030, waxaanay badankoodu tegeen lixdii billood ee u danbaysay sanadka 2011.” Sidaa aya sheegtay warbixinta UNHCR.
UNHCR waxay wallaac xoog leh ka muujisay bilowga sanadka cusub ee 2010, oo ay ka digtay kacsanaanta xeebaha iyo xaalada cimilada oo aad u liidata, waxaanay UNHCR si gaara farta ugu fiiqday mid ka mid ah saddex doonyood oo ka shiraacday Libya oo sidat tahriibayaal Soomaali u badani 14 January 2012 cilad farsamo darteed ku qaraqantay oo la waayay ay ciidammada Illaalada Xeebuhu xaqiijiyeen todobaad ka dib inay saarnaayeen 55 qof oo dhammaantood Soomaali ah, maydkoodana la helay.
Warbixinta UNCHR wxaay xustay in 13 January ee sanadka 2012 ay ciidammada Ilaalada Xeebaha Talyaanigu badbaadiyeen 72 Tahriibayaal Soomaaliyeed oo ku jirtay haweenay uur leh iyo 29 carruur u badan Jaziiradda Malta
Farriinta Berberanews: Haddaad maanka ku haysay amma hunguri kaa hayay inaad tahriibto ku waano ka qaado warbixinta murugada leh ee kuwii kaa horreeyay ku halaagmeen.
Previous articleWefti ka socda dawladda Ingiriiska oo kulammo gooni-gooniya la yeeshay Madaxweynaha Somaliland iyo Madaxda Xisbiyada
Next articleMediterranean takes record as most deadly stretch of water for refugees and migrants in 2011